mayhninsi – စာမျက်နှာ7– MBC
Slider Post Myanmar
ဒီဇင်ဘာ 16, 2019
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ ခရစ်ယာန်ဆက်သွယ်ရေး‌ဌာနမှ ဦးဆောင်၍ “ တင်ဆက်အသိ‌ပေးခြင်းနည်းနာသင်တန်း Presentational Skills Training” ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက် စနေနေ့ နံနက်(၈း၀၀)နာရီမှ မွန်းလွဲ (၁း၃၀)နာရီအထိ အသင်းချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ (၃)တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကို နံနက်(၈း)နာရီတွင် အစပြုခဲ့ပြီး အမှာစကားပြောကြားခြင်းကို အသင်းချုပ် တွဲဖက် […]
“ ယနေ့မီဒီယာနှင့် စိန်ခေါ်နေမှုများ”
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ ခရစ်ယာန်ဆက်သွယ်ရေးဌာနမှ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဝေငှခြင်းအဖြစ် “ ယနေ့မီဒီယာနှင့် စိန်ခေါ်နေမှုများ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၂.၁၁.၂၀၁၉, သောကြာနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းရှိ တီးတိန် ခရစ်ယာန် ဓမ္မကောလိပ်တွင် သွားရောက် ဝေငှခဲ့ပါသည်။ ဆရာများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စုစုပေါင်း(၃၀)ဦးခန့် ပါဝင်တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ 28, 2019
☘️☘️☘️☘️☘️ ရွှေပြည်မြန်မာတွန်းအားပေးသင်တန်း (တီးတိန်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်) ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်၊ ဧဝံဂေလိနှင့် သာသနာပြုရေး ဌာန၊ ရွှေပြည်မြန်မာ နှစ်ခြင်း သာသနာ၊ ဒုတိယ ဆယ်စုနှစ် တီးတိန်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် အတွက် တွန်းအားပေး သင်တန်းကို ဇိုမီးနှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ မန္တလေးမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင် ဘာလ (၁-၂) ရက်များ […]
နိုဝင်ဘာ 19, 2019
(၁၈၀) ကြိမ်မြောက် အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး
မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်၏ (၁၈၀) ကြိမ်မြောက် အမှုဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၅ -၈) ရက်တွင် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ်၊ ကူရှင်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဥက္ကဌ Rev. Dr. ဦးမောင်မောင်ရင်၊ Rev. Dr. Dennis Thawng Mang နှင့် ဒုဥက္ကဌ Dr. […]
Catholic Bishops’ Conference of Myanmar
U Naw Memorial Myanmar Batist Church
Burmese Christian Association of North America